sideed &goorma ayaad
SomaliNet Forum (Archive): Somali Women's Forum: Archive (Before Feb 2000): sideed &goorma ayaad
<!-Post: 17780-!><!-Time: 0-!>
Waxaa laga yaabaa in dad badani igula yaabaan mawduucan laakiin waxaan aaminsanahay inuu ka fiican yahay in maanta oo dhan in lays caayo oo waxaan munaasab `ahayn uun lagahadlo.Hadaan u gudo galo mawduuca,waxaan idin waydiinayaa walaalayaal inaynu halkaan isku waydaarsano isbarasho,waanooyin,& ku cibro qaadasho,
Walaalo sideed ku toobad keentay yacnii maxaa usabab ahaa& goormay ahayd?
waxaan idinka codsanayaa inaydaan dhayal san arintaan ee aad usoo ban dhigtaan dadka waxaaba laga yaabaa inay dad badan ku toobadkeenaan sheekadaada.
tayda dib ayaan kasoo qoridoonaa iinsha Allaah
waxaan idinka dalbayaa inaynu iska dayno afxumada mawduuckasta ku jirta.
wabillaahi tawfiiq,walaashiin Alle ubaahan<!-/Text-!>
<!-/Post: 17780-!> <!-Post: 17866-!><!-Time: 0-!>
waligeen tawba keenaan eheen.
jecelaa inee dadka privatekooda ooga sheekeeyaan
YUX KUU LEH<!-/Text-!>
<!-/Post: 17866-!> <!-Post: 17946-!><!-Time: 0-!>
WALAALO Ladaneey saw ma fiicna in hadaadan adigu fikrad haynin inaad qayrkaa ubanayso, saan hore usoo sheeagyba waxaa laga yaabaa in dad badan ay unoqoto toobadkeen,ogoowna danta aan kaleeyahayna inay tahay uun inaan Alle dartii isu barano oo aanu ahaano walaalo Alle dartiiya
walaalo ladaneey anigu kuguma dhaheen YUX KUU LEH
<!-/Post: 17946-!> <!-Post: 17953-!><!-Time: 0-!>
<!-Text-!>Runtii aad iyo aad ayaan ugu farxay mowduuca aad soo jeedisay waana mid meesha ka maqnaa balse waxaan jeclahay inaan idiin sheego arrin ku saabsan dambiyo badan oo aan horay u galay inaan ka soo laabtay waxaana rajeynayaa inuu Ilaahey iga aqbalo. Dhab ahaantii waxaay diinta sheegtay dambiyo tiro badan oo ah kuwa lagu halaagsamo waxaa jeclahay inay todobo ugu wayn yihiin laakiin culumada qaarkood ayaa sedex dambi si gaar ah ugu hormariya oo yiraahda ayaga ayaaba muhlikaadaka ugu horeeya waana shirkiga, naf la gooyo, iyo sinada. Al-xamdulilaahi, Ilaahey kuwaas waa iga dhowray laakiin waxaan shiddo ka qabay kuwo badan oo iyaga la mid ah. Ha ugu horeeyo hawada nafta oo la raaco, shahwada oo lagu il macaansado, iyo wiliba kadsoomida aduunyada oo aamin laga noqodo. Waxba yaana sheekada idinku dheeraynin ee dambigayga waxa uu gaaray inaan is iraahdo war dambigaaga ayaaba ka batay dambidhaafkaaga ee sidee wax lagaaga aqbali doonaa. Saaxiibadayda oo dhan ayaan mid mid ugu siraystay arrinkaan waxaana ka idmay waano. Way i wada waaniyeen laakiin meeshaydii ayaan ka meesay mudo gaaban ka dib. Ugu dambayntii saaxiibkay ayaa i siiyay cajalad aad u fiican oo aanan dhagaysigeeda ka daalin mar walbna ku celceliyo. Cajalada waxaa duubay Sh. Cali-Qarni cinwaankeeduna waa "KULUNAA DAWUU KHA'DA" Cajaladaas qiso ku jirta ayaa i cajabisay siduu Ilaahey adoon ku caasin jiray waligiis ugu dambi dhaafay. Qisadii oo gaaban waatanaa waa mid lagu waantamo.
Waqtigii nabi Muse (caleyhi salaam) ayaa dadka abaar ku dhacday oo roob la waayay. Gaajo iyo abaar xun meel walba saamaysay. Nabi Muse (CS) ayaa dadkii oo dhan ku soo baxeen oo yiraahdeen Ilaahey noo bari roob ha noo keenee. Nabi Muuse ayaa gacmaha kor ku taagay oo yiri Ilaahayoow na waraabi. Ilaahey (SW) ayaa yiri Muusoow sidee idiin waraabiyaa idinkoo uu idinku jiro nin (adoon) igu caasiyay oo 40 sano aanan tukan yacni ilaahey u sujuudin. Nabi muuse waxa uu yiri Ilaahayoow kaasi ii sheeg aan iska saarnee. Ninkii ayaa Ilaahey ka baqay in la ogaado markaasuu TOWBAD Ilaahey kula cararay oo uu yiri "Ilaaheyoow 40 sano ayaan ku caasiyay dadbigaygana waa qirtay ee iga towbad aqbal" Ilaahey ayaa isla markiiba ka towbad aqbalay. Halkaasna waxaa ka cad xadiiskii nabiga uu ku oranayay "Ilaahey wax farxad galisaa towbada midkiin u towbad keeno rabigiis." Isla markiiba cirka ayaa roob is xiray oo dhulkii ayaa qoyay. Nabi Muuse ayaa yiri Ilaaheyoow i tus aan arko adoonka aad towbadiisa nagu waraabisay ka dib markaad macsidiisa inooga manacday roobkaaga. Ilaahey ayaa ugu jawaabay Muuse ma hadaan ku tusayaa asagoo ii towbad keenay waxaana ceebtiisa asturay mudadii uu caasiga ahaa. Halkaas waxaa kaloo ku duubnaa qisooyin badan balse tan ayaa ii sababtay inaan mar walba Alle u soo laabto waana arrin aan la yaabay oo maalin walba ku ceshado.
Waxaan filayaa inaad kuwo kale oo ka fiican haysaan.
Iga raali ahaadda hadaan dheereeyay.
<!-/Post: 17953-!> <!-Post: 18149-!><!-Time: 0-!>
KU:Axmed yare walaalo khayr Alle hakusiiyo waanad ku mahad santahay inaad fahantay waxaan uuga danlahaa mawduucaan.
Aniguba sidaadaa oo kale ayaan ahaa anoon waligay Alle sixaq`ah uugu sujuudin ayuu Alle s,w, isoo hadeyey 1996kii anoo 19jira anoo aan isleeyahay waligaa sidan dhaami maysid, ayaan waxaan ku fakiray inaan Alle utoobad keeno laakiin shaydaan wuxuu iga hor istaagaba waxaa dhacday maalin anoo walaalahay lafadhiya ayaa waxaa si mucjiso leh anoo arkaya wajigayga uhor maray waxaan ku tilmaami karo inuu ahaa sidii dhimbiil daba, oo sidii uu usii socday dhagtayda bidix galay
isla markiiba waxaan dareemay inuu culays wayni iga dhacay oo aan galay mudo kadiba, inaan wixii danbi aan ku dhaganaa inaan intiisii badnayd ka fuqay,laakiin shaydaan sidaa igumuu daynine heer wuxuu igaadhsiiyey inaan waasho aan ku sigtay,
waxaan in aad ubadan aan qoomamo & oohin joogto ah ku jirayba (Alxamdulilaahi aladii hadaanaa lihaadaa wamaa kunaa linahtadiya lawlaa an hadaanallaah)ayaan Alle uugu mahad naqayaa
oo maanta waxaan ku jiraa nimco Allaah uun uu ogyahay.
qofkii Alle hidaayo kadoona ogaada inuuna Alle hoojinayn oo albaabka taabadu uu kuu furanyahay ilaa inta aanay kuu imaan macaan goysadu ee walaalayaal ka faa�iidaysta samanka
IGA RAALI NOQDA HADAAN BADIYEY.<!-/Text-!>
<!-/Post: 18149-!> <!-End-!>